မိဘဆရာများ သတိထားသင့်တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ် နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူမိန်းကလေး တစ်ယောက် – MEDIALANN
မိဘဆရာများ သတိထားသင့်တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ် နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူမိန်းကလေး တစ်ယောက်
မနေ့ က ကျမဆေးခန်းကို ultrasoundကြည့်ဖို့ သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့ ရင်သားတဖက်မရှိတဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ ထင်မိတာပါ။နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီမလားတာ 3လလောက်ရှိပြီဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ။ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင်လို့ မွေးနေ့ မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ….ရှင်းရှင်းပြောရရင်.အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့ .မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမ ဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ
မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး.သမီးရည်းစားရှိသလားေ ချာ့မေးတော့..ရည်းစားတော့မရှိ… အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်း ဆီကေ ဘာင်းဘီယူဝတ်မိ သည်ဟုပြောသည်..လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးအမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေး မာန်လိုက်တော့မှ တတန်းထဲနေ.သူငယ်ချင်းနှင့်. .ဟုဝန်ခံလာသည်fbပေါ်မှာ ဟိုတလောက ခေတ်စားနေတဲ့ ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့ မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီးအမေကို. . .
ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့် ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့ လောသို့ လော ဖြစ်သည်။ ဒီအမေနှင့် လွှတ်ထားလို့ မပြီး..ငါဝင်ပါမှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီးဆက်မေးမှ..ကျမ ဖင်ထိုင်ရက်ကျမတတ်တတန်းတည်းကျောင်းသားသူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဆင့်လောက်တွေနှင့်..အတူနေကြသည်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းရဲ့ညဖက်စာကြည့်ချိန်တွေမှာ. ညဖက်အတန်းလွတ်တွေထဲသွားကြသော .အဲသလိုကလေးတွေတော်တော်များနေပုံရသည်သူပြောတဲ့ ဘောပ်းဘီယူဝတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း ရည်းစားမဟုတ်ပဲ အတူနေကြသည်တဲ့..နောက်တတွဲကတော့ ရည်းစားပေါ့.7တန်းတွေနော် တခန်းထဲအတူတူ..ချိန်းနေကြသည်တဲ့3တွဲ .ကဲ..ကလေးမို့ တခါတလေမှား သလားလို့ ကြိမ်ရေမေးတော့ ကြိမ်ရေမနည်းတော့ပါ သမီးတို့ အတန်းက..အဲသလို ကြိုက်ကြတာနည်းတယ် 9တန်း 10တန်းဆိုပိုချိန်းတွေ့ ကြတာလို့ ပြောတော့ ကျမ ပက်လက်လန်ကျချင်လာသည်။
မီတာခများလို့ညဖက်ကျောင်းအပေါ်ထပ်တွေ မီးပိတ်ထားတော့ ဘိတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီထင်.ဒါတောင်ကလေးကသွက်လက်ချက်ချာပုံသိပ်မပေါ်ေ ဘ်ာဒါဆောင်ကြေးကလည်း..မနည်းပါ..တော်ရုံမိဘ မထားနိုင်တဲ့အနေအထားပါဘေ်ာဒါနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွဲဖွင့်ထားပါသည်..သေးသေးချာချာနေရာလည်းမဟုတ်ပါ ဒီကိစ္စမျိုးကကျမမှ ဖွင့်မပြောလျင်. .ကိုယ့်ကလေးအတွင်းရေးမို့ဖုန်းဖိရင်း.. အခြားမိဘ..သတိမထားမိဖြစ်နေမှာရော သားမွေးထားသူတွေရောသမီးမွေးထားသူတွေရော ကျောင်းထောင်ထားကြသော..သူငယ်ချင်းတွေရောကို သတင်းပေးချင်ရ်ျရေးပါသည်လူနာကို ငဲ့ညာသောအားဖြင်.အမေးအဖြေများကို.လျော့ရ်ျရေးပါသော်လည်း.ညနေဆေးခန်းက..အပြန်မှာ.ကျမ မလှုပ်နိ်ုင်အောင်ပင်.ကြောက်စရာ..အဖြေများရခဲ့ပါသည်mမိဘများ..ဆရာများ..ခေတ်ကို..သတိထားကြပါ ညဘက်စာကျက်ဝိုင်းများကို..သတိထားကြပါ စာသင်ကျောင်း..စာသင်ခန်းများကိုလည်း..သတိထားကြပါလို့ သတိပေးပါရစေ မိဘများသတိပြုကြဖို့ 
Credit to ထိပ်ထား